कहिले ब्यूझन्छ सरकार ? - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	कहिले ब्यूझन्छ सरकार ?
कहिले ब्यूझन्छ सरकार ?
by Tanahu Awaj 14th May 2020 14th May 2020
14th May 2020 14th May 2020 104 views
विश्वमा नेपालको आफ्नै गौरव छ । गौरवमय स्वाभिमानले भरिएको इतिहास छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाल र नेपालीले कहिल्यै पनि विश्वको कुनै पनि शक्तिसंग शिर निहुराउनु परेन । सदैव आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तालाई जोगाई राख्न सफल भयो । समग्र संसार माथि नै राज गरिरहेको अंग्रेज शक्ति सामू शिर उठाएर छाती फुलाएर हुँकार छोड्ने सामथ्र्य राख्थ्यो नेपालले । विश्वको इतिहासमा यदि कसैले आफ्नो सत्रुको मुक्तकण्ठले प्रसंसा गरेको छ भने त्यो केबल बीर गोर्खाली सेनाको गरेको छ । इतिहासमा कसैको सामु नझुकेको कसैसंग नडराएको कसैको अगाडि नडगमगाएको, नेपालको स्वाभिमानमा फेरी एकपटक प्रश्न उठेको छ । दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतसंगको सीमा विवाद फेरी एक पटक चर्केको छ । भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर फरक सडक बनाएको प्रसंगसंगै कालापानी र लिपुलेकको विषय फेरी एक पटक बहसमा आएको छ । केही समय पहिले मात्रै भारतले नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेको समयमा पनि त्यही विषयले चर्को रुप लिएको थियो । तर आलटाल र गलफत्तीमै त्यो सेलायो । यतिबेला पुनः सोही विषय आमनेपाली माझ तात्तातो बहसको विषय बनेको छ । सडकदेखि सदनसम्म त्यही विषयमा बहस र नाराबाजी भएको छ । सडकमा भारतमा भारत विरोधी नारा घन्केको छ भने सदनमा कुटनीतिक पहलको लागि सरकारलाई दवाव दिने काम भैरहेको छ । तर विडम्बना ! जनतामा यतिको आक्रोस फैलिरहँदा पनि सरकार अझै अर्धनिंद्रामै छ । बरु उल्टै लकडाउनको समयमा सडकमा उत्रेर नाराबाजी गरेको भन्दै भटाभट नागरिकहरुलाई गिरफ्तार गर्दैछ । आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता जोगाउन जुनसुकै हद पनि पार गर्नुपर्ने अबस्थामा हाम्रा नेताहरु नेपाल र नेपालीको नून खाएर नूनको सोझो छिमेकीको गर्दैछन् । विवादित नेपाली भूमि त्यहाँदेखि नै नेपालको नरहेको वक्तब्य दिईरहेका छन् । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू सीमा विवादको विषयमा जभाभावी र मन लाग्दी नबोल्न आफ्नो मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिईरहेका छन् । हो, माननीय मन्त्री सांसद जस्तो पदमा हुने व्यक्तिले जथाभावी र मनलाग्दी बोल्नु हुँदैन । तर आफूले आफूले थाहा पाएको आफ्नो अनुभव र अध्ययनले ज्ञान भएको कुरा भन्न र बोल्न पनि के अब प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिनै पर्ने हो ? कि प्रधानमन्त्री जो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि कालापानी र लिपुलेकको विवाद मेरो पालामा शुरु भएको हो र, मलाई यो विवादमा तानेको ? भनेर मिडियामा निलज्र्ज भन्दछन् । ति प्रधानमन्त्री जो भारतले सडक खनेको कुरा मलाई जानकारी गराइएन, झुक्याइयो भनेर विवशता देखाउँछन् । ती प्रधानमन्त्री जसका मन्त्रीहरु एउटा कोठामा सीमित पानीजहाज कार्यालयको लागि यो विपत्तीमा पनि करोडौंको गाडी किन्ने तरखरमा छन् । ति प्रधानमन्त्री जसले साढेदुई बर्ष पहिले पत्रकारले विकास र समृद्धिको बारेमा प्रश्न सोध्दा म सरकारमा गएको दुई बर्षपछि यही प्रश्न मलाई गर्नु, गुनासो गर्ने ठाउँ पाउनु हुन्न भनेको थिए । साढे दुई बर्ष पछि आजको अवस्था त हामीलाई थाहै छ । के अब हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दा पनि आफ्नो विचार राख्न पनि प्रधानमन्त्री ज्यूकै सल्लाह र निर्देशन मान्न पर्ने हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू तपाई त्यो कुर्चीमा बसेपछि नेपाली जनताको प्रसंसा र सह्रानाको जति हकदार हुनुहुन्छ त्यति नै तयार हुनु पर्दछ नेपाली जनताको गुनासो, गाली र आक्रोस सहन पनि । नेपाली इतिहासकै बलियो तपाईको सरकार किन यसरी लर्खराई रहेको छ । किन सुस्त तपाईहरुको हिडाई र गराई ? तपाई जति तिब्र गतिमा सोंच्नु हुन्छ, अनि चतु¥याईका साथ बोल्नु हुन्छ त्यो किन देखिदैन तपाईको कार्य सम्पादनमा ? तपाई बेलाबेलामा भनि रहनु हुन्छ– मलाई थाहा दिएनन्, मलाई भनेन्, मलाई झुक्याए । आजको समयको गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री भएर यस्तो कुरा गर्न त लाज लाग्न पर्ने हो तपाईलाई । के तपाई शाहवंसीय शासनकालको महाराज जस्तै हो र ? सबै कुरा तपाईको हजुरीमा टक्¥याउनलाई ? राज्य र नागरिकहरुको खबर कहाँ के छ थाहा पाउने प्रयाप्त सुत्र, र आधार तपाईको राज्यसंयन्त्रसंग छैन र मलाई झुक्याए भन्नु भएको हो ? आफ्नो दुईचार जना चाकडीबाज र आसेपासेले जे भन्यो त्यसैलाई ब्रम्हसत्य मान्दै म जस्तो कोही छैन भनेर दम्भ गर्ने हो भने गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री तपाई र शाहबंसीय महाराजहरुमा खास के नै अन्तर भयो र ?
सुस्ता लगाएत तराई र मधेशका हजारौं हजार हेक्टर भूमि बर्षेनी भारतले मिच्दै आईरहेको छ । समय समयमा जंगे पिलर हराउँदै गएको छ । मौका मिल्नासाथ लिपुलेक र कालापानी पनि आफ्नो भएको दावी गर्न छोड्दैन भारतले । दुईचार जना चिनाया नागरिकले सिंहदरबार अगाडि नै नेपाल प्रहरीलाई कुटपिट गर्ने आँट गर्दछन् । अब त हुँदा हुँदा चिनले पनि सगरमाथा पुरै आफ्नो भएको भन्न थालिसक्यो । अझ पनि किन मौन छ सरकार ? किन अझै व्यूझँदैन ? हिजो काँग्रेसको सरकार निदायो । सत्र हजार नेपालीको बली दिएर जनयुद्ध गरेर गठन भएको माओवादीको सरकार निदायो । मिलीजुली गठबन्धनमा बनेका सरकारहरु पनि निदाए । आज दुई तिहाई बहुमत सहितको यति बलियो कम्यूनिष्ठ सरकार पनि निदाउने ? आखिर कुन सरकार हो नेपाल र नेपालीको लागि व्यूझिदिने ? अनि कहिले हो व्यूझने ? हाम्रो नागरिकतामा भारतीय नागरिक लेखिएपछि कि चिनिया लेखिएपछि ?
निश्चय पनि सीमा विवादको समस्या सडक आन्दोलनबाट सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले नै कुटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ । अहिले सडकमा भएको आन्दोलनलाई कतिले सरकार विरोधी आन्दोलनको संज्ञा पनि दिएका छन् । तर अहिले सडकमा देखिएको भारत विरोधी गतिविधि र लिपुलेक हाम्रै हो भन्ने नाराबाजी सरकार ढलाउनका लागि होइन । त्यो त एउटा नेपालीको सच्चा र निस्वार्थ राष्ट्रप्रेम हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि सरकारलाई गराइएको सर्तकता हो । र मित्रको खोल ओढेर नेपाली भूमिमा ¥याल चुहाउने छिमेकीलाई खबरदारी पनि हो । प्रधानमन्त्री ज्यू, लिपुलेक र कालापानीको विवाद कस्को पालामा शुरु भयो ? कसरी शुरु भयो ? त्यो नेपालको आन्तरिक कुरा हो । त्यसको बारेमा हामी हामी बीच छलफल गर्दै
गरौंला । तर आजको मितिमा नेपालको कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले र तपाईकै कार्यकालमा कालापानी र लिपुलेकको विषय बारम्वार उठेको हुनाले आजको दिनमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईको हो । यो विषयलाई कसरी स्पष्ट रुपमा पार लगाउने भन्ने कुराको स्थायित्व र नेतृत्व पनि तपाईकै हो । किनभने तपाई यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
आफ्नी आमा माथि अरुले कुदृष्टि राख्दा पनि मौन बस्ने पुत्र सपुत हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ज्यू यसरी समय समयमा छिमेकी राष्ट्रहरुले हाम्रो मातृभूमिप्रति गिद्धेदृष्टि राख्नु भनेको नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमानको लागि ठूलो खतराको संकेत हो । तपाईसंग बलियो सरकार छ । तपाई यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यसैले अब व्यूझनुस् । केही गर्नुस् । यदि लरतरो र आलटाले कुरा गरेरै अब साढेदुई बर्ष प्रधानमन्त्री खाने सत्तालिप्सीको सुरसारमा मात्र हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईको मातृभूमिप्रतिको ठूलो धोका हुनेछ । यसकारण समय छँदै व्यूझनुस् ।
सरकारवादी हुने देवानी मुद्दा र कार्यविधि
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आलोचना, अस्विकार्दै सरकार